युगसम्बाद साप्ताहिक - व्यक्तिगत चुरीफुरीको राजनीति - महेश्वर शर्मा
Monday, 02.17.2020, 04:19am (GMT+5.5) Home Contact
व्यक्तिगत चुरीफुरीको राजनीति - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 11.20.2012, 04:13pm (GMT+5.5)
नेताहरू व्यक्तिगत तुजुक देखाएर एकले अर्कालाई सत्तालोलुप भनिरहेका छन् । सत्तासीनले सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफ्नो पराक्रम देखाएका छन् भने सत्ता बाहिरकाले समेत धाकधम्कीबाट सत्ताबाट झार्छौं भनेको सुन्दा आश्चर्य लाग्छ । कोसंग कति शक्ति छ भन्ने कुरा जनतालाई थाहा छ । त्यसैले यो घमण्ड र शक्ति प्रदर्शनका खोक्रा नाराको कुनै अर्थ छैन । सत्ता कब्जा माओवादीको पुरानै नारा हो र आज पनि सत्ता उनीहरूकै हातमा छ । कांग्रेस, एमालेको सडक आन्दोलन त ‘तीजका कुरा गरे पनि खाएझैं हुन्छ’ भनेजस्तै हो । बरु दुवै पक्षले दुराशय, फुइँ र सत्ताको उन्माद छोडेर सुहाउँदो काम गरेर निकास दिन सके हुन्थ्यो ।
नेतृत्वमा हुनुपर्ने प्रमुख गुण सेवा भावना हो, तर यहाँ नेतृत्व गर्छौं भन्नेहरूमा सेवा भावना दुर्लभ भैसक्यो । आफूमा नेतृत्व गुण नहुनेहरू नेतृत्वको अभिनय गरेर दम्भ देखाउन खोज्छन् तर राजनीति देश र जनताको सेवाका लागि हो, आफ्नै मात्र दुनो सोझ्याउन र चुरीफुरी देखाउन होइन भन्ने बुझिदिएमा समाधानको बाटो पैलिन्थ्यो तर उनीहरू जानेर पनि त्यसो गर्दैनन् ।
आजको मूल आवश्यकता संविधान हो । संविधान भीडले बनाउने वस्तु होइन, विज्ञले बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि विशेषज्ञ समिति बनाउन सबै दल सहमत हुनुपर्दछ । प्रत्येक दलले सरकार बनाउने कुरा मात्र प्राथमिकतामा राख्नाले सबै कुरा विग्रेको छ । दलहरूले आफ्नै अनुकूलको संविधान खोज्नु गलत काम हो । संविधान त दलका लागि मात्रै होइन, देश र जनताका लागि हो । तर यहाँ अप्ठ्यारो के छ भने विज्ञहरू समेत दल दलमा फसेर, विभाजित भएर दलीय नेताकै भाषा बोलिदिनाले समस्या अल्झेको हो । अब पनि गाडेको मुर्दा (संविधानसभा)कै राग अलापेर पार लाग्दैन ।
विघटित संविधानसभा, संविधानसभा जस्तो नभएर राजनीतिक दाउपेचको अखडा बनेको थियो । त्यो सभा भवनभित्र नेताले भेडाबाख्रा सम्झेकाहरू पस्थे–निस्कन्थे भने छानिएका होटेल–रिसोर्टहरू चहारेर खुराक खाएर रातापीरा अनुहारका पहलमानहरूले कहिलेकाहीं संविधानसभा हलमा कुस्ती खेलेर चार वर्ष बिताए । उनीहरूका हनुमान हरूवा–चरुवाहरूले बुझेर वा नबुझेरै पनि ताली बजाउँदा मख्ख पर्थे । दुई वर्षका लागि चुनिएको संविधानसभा थप दुई वर्ष कृत्रिम श्यास प्रश्वासमा राखेर पनि अनाडीहरूले मध्यरातमा आर्यघाट पु¥याएर खरानी पारे । संविधानसभालाई खेलाँची सम्झेर पटकपटक चुनाव गराउनु मुर्खता हुन्छ । त्यस कारण जनता र देशका लागि सोच्ने हो भने विज्ञहरूको समितिद्वारा संविधान मस्यौदा तयार गर्ने र संसदको निर्वाचन गराएर अनुमोदन गराउने बाटो समात्नुपर्छ, विवाद बढाएर पार लाग्दैन ।
अहिले राजनीतिकवाजहरूले जे गरिरहेका छन् त्यो देश र जनताका लागि नभएर आफ्नै स्वार्थ सिद्धिका लागि गरेका छन् । बाबुरामजी जनताको दुःख बुझ्न प्रत्येक महिना एकजना गरीबका घरमा बास बस्न गएका छन् । त्यो केवल देखावटी र प्रचारवाजी भएको छ, स्वाङ मात्रै भएको छ । अस्ति भर्खर कपिलवस्तुको चनइ–१ मा मुस्तफा दर्जीको घर बस्दा बाबुरामजी र उनको दलबललाई भोज भतेर गर्न गाविसको बजेटबाट डेढ लाख खर्च गरिएछ । प्रधानमन्त्रीका निम्ति अस्थायी ट्वाइलेट बनाउन मात्र आठ हजार खर्च लाग्यो रे ! कि त जनताका लागि पनि चर्पी बनाइदिनु पथ्र्यो, नत्र जनतासंग मिसिन जानेले लोहोटा लिएर मैदान गएका भए हुन्थ्यो । सत्ता शक्तिको दुरुपयोग गरेर राजनीति गर्ने परिपाटीको अन्त्य कहिले हुन्छ खै ?
आफू मात्रै लायक, अरु सब नालायक र आफूले भने–गरेको मात्रै ठीक, अरुको बेठीक सम्झने विकृत सोचाइबाट ग्रस्त नेताहरूले आफ्ना कामको पनि निरीक्षण र मूल्यांकन गरेर मात्र अरुका दोष उधिन्नपट्टि लागे त जनताले पनि पत्याउने थिए होला तर यहाँ त आफ्ना आङ्को भैंसी नदेख्ने र अरुका आङ्का लिखा पनि देख्ने गर्नाले धेरै कुरा विग्रदै गएको छ । सरकारी बजेटकै प्रसंगमा पनि एमालेका अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट पेश गर्न जाँदा माओवादीले संसद्मा देखाएको जंगली छाँट अहिले माओवादीले बुझपचाए जस्तो गरे पनि जनताले बिर्सेका छैनन् । ‘आफ्ना भने कुरा, अरुका माकुरा’ भनेजस्तो गर्न त नहुने हो नि, तर यहाँ नहुने नहुने काम कुरा गरेर नै जित्न खोजेको देखिन्छ ।
यता सरकारको प्रशासन यन्त्रमा कति खिया लागिसक्यो भने ससाना कुराको व्यवस्था पनि मिल्दैन । गाविस सचिव र वडा सचिवले वृद्धभत्ता वितरणमा अनियमितता र भ्रष्टाचार गरे भनेर नगरपालिका र बैंक मार्फत दिने भनियो, तर अनियमितता गरेका हुन् भने ती सचिवलाई किन कार्वाही गरिएन ? किनभने तिनीहरू पक्कै पनि कुनै न कुनै नेताका मान्छे होलान् । हालै एकजना वृद्ध फागुराम चौधरी वृद्ध भत्ता लिन लाइनमै ढलेर मृत्यु भएछ । बैंक, नगरपालिका, वडा वा गाविस जसलाई जहाँबाट लिन सजिलो हुन्छ त्यहींबाट दिने व्यवस्था गर्न सकिंदैन ? यो कुनै ठूलो कुरा होइन, केवल व्यवस्थापकीय कमजोरीको नमूना हो । यस्ता साना कुराबाट पनि शासन कसरी चलेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
त्यस्तै अर्को पनि एउटा सानै कुरा गरौं– प्रजातन्त्र आएका पनि छ दशक बितिसके । यहाँ तिहारमा चाहिने फूल र रङ समेत भारतबाट आउने, दशैंमा खसी–बोका–कुखुरा–राँगा–फलफूल एवं तरकारी पनि भारतबाटै ल्याइने भएपछि आजसम्म देशमा के भयो त खै ? आफूले खानका लागि मात्रै झगडा गर्ने, देश विकासतर्फ सिन्को नभाँच्ने, भएका उद्योगधन्दा र विकासका पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने बाहेक यहाँ के भयो खै ? के यही हो राजनीतिको उद्देश्य र सार ? सत्ता शक्तिको दुरुपयोगको नमूना अरु के हुन्छ ? गणतन्त्रका नारा फलाकेर मात्रै हुन्छ ? नेताहरूले छातीमा हात राखेर नाम सम्झदै– ‘मम’ भने कसो होला ?